Akụkọ - Blch Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.
WENZHOU BLCH Pneumatic Science & Technology Co. Ltd kwadoro ego nke ndị na-etinye ego 5 na Tianyang Village, yuecheng Town, Yueqing City, nke nwere naanị ndị ọrụ 10 na 300 puku yuan nke uru mmepụta kwa afọ.
Iji mee ngwangwa ụlọ ọrụ mmepe ọsọ, na aha isi obodo nke ụlọ ọrụ bụ 5.5 nde yuan. N'otu oge ahụ, aha ụlọ ọrụ ahụ kwalitere na Zhejiang Bailing Technology Co., Ltd., tinyere ndị ọrụ karịrị 70 na uru mmepụta kwa afọ nke karịrị nde yuan 3.
Emetụta nsogbu ụwa zuru ụwa ọnụ, uru mmepụta kwa afọ karịrị naanị yuan 4.9, mana ụlọ ọrụ ahụ belatara nyocha teknụzụ na ego na ndị ọrụ mmepe, wee webata nnukwu teknụzụ na njikwa njikwa, na-etinye ntọala siri ike. maka mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Mpaghara mmeputa ohuru ohuru nke kpuchitere ebe 30 acres na Yueqing Economic Development zone malitere oru. N'okpuru nduzi nke ndị isi ụlọ ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ amalitela ngwa ngwa, yana ndị ọrụ karịrị 70 na uru mmepụta kwa afọ nke karịrị yuan 10.
Companylọ ọrụ ahụ mepụtara ngwa ngwa pneumatic fittings usoro ngwaahịa ma tinye ya n'ime usoro mmepụta. Ka ọ na-erule ngwụsị nke ọnwa Disemba, ọ gwụchara otu mmepụta uru nke yuan 1.5 na ngụkọta ngụkọta nke ihe karịrị yuan 18.92. N'otu afọ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ kwadebere ma tinye usoro ihe eji arụ ọrụ Kingdee ERP iji dozie usoro ọrụ ahụ.
Companylọ ọrụ ahụ mụbara nkà na ụzụ ọhụrụ ma kachasị usoro njikọ dị iche iche. Ngwaahịa ndị ahụ zuru oke ma dị mma karịa. N'otu oge ahụ, a ọtụtụ nke mmepụta akụrụngwa na elu technology ọdịnaya, akwa ogo nke iche na keukwu technology zụrụ, nke mma ngwaahịa mma na accelerated. Mmepụta arụmọrụ. Mkpokọta mmepụta kwa afọ ruru yuan 50.
The ụlọ ọrụ ọhụrụ mepụtara cylinder usoro na Pu tube usoro ngwaahịa ọma, na n'otu oge ahụ melite abụọ mmepụta na n'ichepụta ngalaba na ọnụ ọgụgụ mmepụta, ihe karịrị 80 ọhụrụ ọrụ, dechara mmepụta iwu nke ihe karịrị 60 nde yuan, na ihe ịga nke ọma ghọtara kwa afọ ngụkọta mmepụta nke 80 yuan. .
N'ihe banyere ahia nke mmadu, onu ahia ndi mmadu emeela ka odi nma. N'okpuru nrụgide dị iche iche, ụlọ ọrụ ahụ kpebisiri ike itinye ego na akpaaka na ozi ọmụma iji ghọta nkwalite ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi na nke dijitalụ, n'otu afọ ahụ, o setịpụwo ahịa nke ruru nde 120. .